China natural Muscovite mica vovoka sy mpamatsy | Huajing
Huaica makika makorikaovan'ny Huajing makiazy dia mampiasa akora mineraly sinoa, ny mineraly dia avy any amin'ny County Lingshou, faritanin'i Hebei, Sina. Manana fahazoan-dàlana hitrandraka ny harena ankibon'ny tany. Ireo fitaovana dia tsy manana asbestos, metaly mavesatra mahafeno ny fitakiana kosmetika.
Powder Muscovite Mica voajanahary
WM-60 fotsy volafotsy 82 ～ 85 150 ～ 170 7 F. 8 F1 F1 F10 F3 ＜ 0,5 60 0.22 famirapiratany aloky ny maso
WM-100 fotsy volafotsy 82 ～ 85 90 ～ 100 7 F. 8 F1 F1 F10 F3 ＜ 0,5 60 0.22
WM-200 fotsy volafotsy 84 ～ 89 30 ～ 40 7 F. 8 F1 F1 F10 F3 ＜ 0,5 70 0.20
WM-325 fotsy volafotsy 84 ～ 89 18 F23 7 F. 8 F1 F1 F10 F3 ＜ 0,5 80 0.16 mamirapiratra avo fototra, aloky ny maso, crème BB, crème CC, blusher
WM-600 fotsy volafotsy 84 ～ 89 9 ～ 12 7 F. 8 F1 F1 F10 F3 ＜ 0,5 90 0.14
WM-1250 fotsy volafotsy 83 ～ 88 6 ～ 9 7 F. 8 F1 F1 F10 F3 ＜ 0,5 70 0.12
44,5 ~ 46.5% 32 ~ 34% 8,5 ~ 9.8% 0.6 ~ 0.7% 0,53 ~ 0,81% 0.4 ~ 0.6% 0.8 ~ 0.9% 3.8 ~ 4.5%
refrefrance loko Mohs mafy coefficient elastika mangarahara Teboka mitsonika hery manelingelina fahadiovana madio
650 ℃ Fotsy volafotsy 2.5 （1475.9 ~ 2092.7） × 106Pa 71,7 ~ 87,5% 1250 146.5KV / mm > 99,5%
Huajing ny mika muscovite mika kosika dia mampiasa akora mineraly sinoa, ny mineraly dia avy any amin'ny County Lingshou, faritanin'i Hebei, Sina. Manana fahazoan-dàlana hitrandraka ny harena ankibon'ny tany. Ireo fitaovana dia tsy manana asbestos, metaly mavesatra mahafeno ny fepetra fanatsarana tarehy. Aorian'ny fanamasinana, fanasana, fikosehana, fanasokajiana hydraulic, fanamafisana ny tempreture avo lenta, farany ny vokatra dia fananana tombony amin'ny malefaka, malefaka, avo lenta, tahan'ny hatevin'ny savaivony, ary hoditra mahafinaritra .
Ny vokatra dia afaka mifanaraka amin'ny filàna roa samy hafa: matte sy mamiratra. Ny haben'ny vokatra dia 5μm～200 μm. Mazava ho azy, ny vokatra dia azo novokarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa ny lanja fitondraana menaka na ny loko fangatahana manokana. Amin'izao fotoana izao, muscovite kilasy kosmetika no tena ampiasaina amin'ny fototra, aloky ny maso, blusher ary vovoka talcum, sns.
Inona no ananan'ny Mica Powder amin'ny hetsika kosmetika?
Mica dia vokatra mineraly voajanahary miaraka amin'ny fahamarinan-toerana simika avo lenta ary zavatra tsy mitongilana tanteraka, noho izany dia azo antoka, tsy misy poizina, tsy manimba ary mety amin'ny kosmetika. Mica dia iray amin'ireo singa amin'ny granite, ary ny fahamarinan-toerana ara-tsimia dia mitovy amin'ny granite.
Mica wafer dia afaka miaro taratra ultraviolet sy infrared, noho izany dia mpanohitra anti-ultraviolet tsara tarehy ho an'ny cosmetika izy io. Satria voajanahary voajanahary, tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza izy io, dia manana tombony izay tsy ananan'ny agents anti-ultraviolet biolojika synthetic. Satria manify faran'izay manify ary matanjaka be ny fahaizany manarona, kely fotsiny amin'ireo vokatra ireo no ilaina mba hamoronana sosona tsy hita maso an'ny mpiaro anti-ultraviolet sy ny mpanazava eo ambonin'ny hoditra.
Satria salama tsara ny mofo mika ary tsy mitohy ny firakofana amin'ny hoditra, dia tsy misy fiantraikany amin'ny fofonain'ny hoditra izany ary mahatonga ny hoditra hahatsapa ho mahazo aina.
Ny hamandoana dia tsy afaka miditra amin'ny mika wafer, izay afaka manakana ny fipoahan'ny hamandoana amin'ny hoditra rehefa ampiasaina amin'ny vokatra mandomando.
Fahaizan'ny famokarana: 1500tons / volana
Famonosana: 500KG / 25KG / 20KG, (kitapo PP na PE)
Fomba enti-fitaterana: kaontenera na betsaka
Manaraka: vovoka mika vita pirinty
Muscovite Mica an'ny tany maina
Muscovite Sy Phlogopite Mica